फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - भोट जोख्ने भाँडो
भोट जोख्ने भाँडो सोम खनाल
जडीबुटी नरेफाँटमा एक जोडी नवदम्पतीले साग–सब्जी पसल खोलेका छन् । उनीहरूले पसलमा जोख्ने भाँडो राखिसकेका थिएनन् । त्यसैले सब्जी जोख्न छेवैको किराना पसलमा जाने गर्थे । अहिले आफ्नै पसलमा जोख्ने भाँडो राख्न चाहांदा रहेछन्, र सल्लाह गर्दा रहेछन् । उहीहरूको संवाद यस्तो थियो–
श्रीमान्– हेर बूढी, पसलमा एउटा तराजु नभइ भएन, कति अन्त गएर जोख्नु !
श्रीमती– सुन बुढा, तराजुले मात्रै जोखिंदैन । एकापट्टी ढक पनि राख्नु पर्छ । बजारमा गुणस्तर परीक्षण नभएका ढकहरू छ्यापछ्याप्ती पाइँदा रहेछन् । तराजु राम्रोसँग समाउन पनि जान्नु पर्दो रहेछ । तराजु पनि अनेक खालका हुने रहेछन् । सब्जी यस्तो महंगो छ, वजन ठ्याक्कै कति छ भनेर आफैंले अङ्कमै नदेखुन्जेल ग्राहकलाई विश्वास पनि हुँदैन । त्यसैले तराजु होइन बूढा, डिजिटल काँटा राखुम् ।
श्रीमान्– डिजिटल काँटा पनि कहाँ भरपर्दो हुँदो रहेछ र ! बाहिर हेर्दा राम्रो, तर भित्रभित्रै पार्टपूर्जा बिग्रेर राम्ररी कामै नदिने ।
श्रीमती– त्यो त ब्राण्ड अनुसार हुन्छ नि ! रुख ब्राण्डको चै ल्याउँदै नल्याउने । कम्प्लेन धेरै आको रहेछ । पहिले पनि पाँच बर्षको ग्यारेण्टी हुन्छ भनेर धेरै जसोले रूख ब्राण्डको राखेछन् । तर तीन बर्ष नहँुदै भताभुङ्ग भएछ । सूर्य ब्राण्डको निकै भरपर्दो हुने रहेछ । उहिल्यै अधिकारीले बनाएका बेला सूर्य ब्राण्डको खुब राम्रो थियो रे । मान्छेले खुब मन पराएका रहेछन्, तर आरिसेहरूले नौ महिनामै बञ्चराले हानेर फुटाल्देका रहेछन् । परार साल ओलीले पनि सूर्य ब्राण्डको उस्तै राम्रो बनाएछन् । राम्ररी चल्दाचल्दै त्यसलाई पनि आरिसे छिमेकीले फुटाइदेछ । अहिले ओलीले नै फेरि सूर्य, गठबन्धन् र हँसिया हतौडा ब्राण्डका अझ दरा बनाएका छन् रे । पाँच बर्ष ग्यारेण्टी टिक्छन् भन्दा रहेछन् मान्छेहरू ।
श्रीमान्– कस्तो रहेछ त्यो गठबन्धन ब्राण्ड चै ?
श्रीमती– यसमा सूर्य ब्राण्डका पार्टपूर्जा ६० प्रतिशत र हँसिया हतौडा ब्राण्डका पार्टपूर्जा ४० प्रतिशत राख्या छन् रे । त्यो हँसिया हतौडा ब्राण्डका पनि पार्टपूर्जा त राम्रै रछन् तर अलि हतारमा ठोकठाक गरेर बनाएको भएर मेसिन त्यति गतिलो बनेनछ । तर त्यसका अधिकांश पार्टपूर्जा सूर्य ब्राण्डसँग मिल्दा रछन् । त्यसैले सूर्य र हँसिया हतौडाका पार्टपूर्जा मिसाएर बनाएको गठबन्धन ब्राण्ड अझ दरो हुन्छ र ५ बर्ष टिक्छ भन्दा रहेछन् ।
श्रीमान्– बजारमा विवेकशील ब्राण्ड पनि आउँदैछ रे नि त ! केही समय पर्खिने पो हो कि ?
श्रीमती– मैले पनि विवेकशील ब्राण्डको तराजुको बारेमा सुनेकी हुँ । तर उनीहरूले बढीमा २ थान तराजु बनाउने अरे अहिले । अनि मान्छेले मन पराए भने दश–बीस बर्षपछि अरू बनाउने अरे । अब हामीलाई अहिले चाहिएर फिटिफिटी भाको छ, कता दश–बीस बर्ष कुर्नु त बुढा ?
श्रीमान्– त्यो त हो । अनि त्यो राजतन्त्र ब्राण्ड पनि थियो नि, त्यो चै के भएछ अचेल ?
श्रीमती– त्यो उहिल्यै २०० बर्ष अगाडि देखिको पुरानो थियो नि ! ज्ञानेन्द्रले बढ्ता जान्ने भएर कामै नलाग्ने गरि बिगारे । अहिले त्यसका पूर्जाबाट कसैले हलो बनाए, कसैले गाईका गलामा बाँध्ने घन्टी बनाए । त्यो इतिहास भइसक्यो बुढा !
श्रीमान्– भनेपछि अब के गर्ने त ?
श्रीमती– सूर्य, गठबन्धन वा हँसिया हतौडा जुन ब्राण्डका भए पनि ती बनाउने कम्पनी अहिले एउटै रहेछ, लेवल मात्र फरक रहेछ । त्यसैले यिनै ब्राण्डमध्ये यहाँ नजिक जुन उपलब्ध छ, त्यही राखौं, धेरैतिर मन नडुलाउँ ।
श्रीमान्– ठीकै भन्यौ बूढी । सारै विवेकशील छौ तिमी !
श्रीमती– तिमी पनि कम्ताका छैनौ नि, बूढा ।